"Forex" kuyinto lwemali ezimakethe zomhlaba jikelele. Namuhla, ukufinyelela ivuliwe ngoba cishe yonke abatshalizimali abafisa ukuqagela exchange rate. Ikhono ukudayisa livulekele ngokuphelele wonke umuntu, kuhlanganise abanikazi cent imali. Lwemali nokuhwebelana kungenziwa labizwa ngokuthi ibhizinisi esinzulu. Ukufinyelela ngezigidigidi zamaRandi dollar emakethe zabantu abavamile ukunikeza forex-wabathengi abasebenza ngqo amabhange. Kukhona izinkampani eziningi abazimisele ukwenza ngokuthi umlamuleli phakathi umhwebi emakethe lwemali. Ukuze ekuphumeleleni kwebhizinisi exchange angaphandle ukukhetha umlingani onokwethenjelwa.
Ujwayele ukuphatha isikhungo "Forex4you"
isithakazelo Omkhulu uye waholela kuvulwa inkampani umphakathi emakethe lwemali, ukunikela ukufinyelela "Forex". Lokho funa usuqalise kuvulwa Centre Intengo "Forex4you". INdikimba Ebusayo iqondisa ukusebenza iphrojekthi inkampani ngamazwe E-Ukuhwebelana Kwembulunga Yonke nezezimali Group, Inc., okuyinto ngokukhethekile amakhasimende okudayisa. Le nkampani ngokomthetho kulo -British Virgin Islands. Its inombolo yokubhalisa 1384287. E-Ukuhwebelana Kwembulunga Yonke nezezimali Group , Inc. It inikeza uhlu olubanzi amasevisi Brokerage ku-intanethi. KwaBantu namaklayenti abazenzi ngosizo izinhlaba yokukhokha. "Forex4you" - ingenye Amahhovisi izinkampani ezinkulu global emakethe virtual yasekhaya. Forex4you.org - iphrojekthi esesikhundleni nozakwabo emazweni anjenge Russia nase Latvia, UK kanye Malaysia, India.
Ensimini ka Russia lokuhweba uvele kuka 2007. Forex4you.org - akusiyo nje iphrojekthi virtual, iyisikhungo nokuhwebelana anikeza izinkonzo ku-intanethi. ukumelwa lenkampani amahhovisi emadolobheni amaningi kuwo womabili eRussia kanye wangaphambili amazwe eSoviet Union. Inikeza basekela zonke amaklayenti ezindabeni zokuhweba. NDD (Ayikho Desk Intengo) kuyinto omunye onobuhle engcono ophumayo kuyatholakala emakethe interbank, nokuthi luqhutshwa yiningi «Forex4you». Ukubukeza ukusetshenziswa kwaso, kanye jikelele imisebenzi yenhlangano ushiye amakhasimende amaningi. Ngithanda ukusho ukuthi impendulo umsebenzi igxile kuphela omuhle.
Ukunakekela mayelana namakhasimende
igama lenkampani ukhuluma kakade mayelana lokuthi siphathelene nokunakekela amakhasimende abo. "Forex4you" lihunyushwe English lisho "forex" ngawe. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo inikeza ukwesekwa professional eqinile hhayi kuphela abadayisi abanolwazi, kodwa futhi abantu abenza nje izinyathelo zokuqala kulesi siqondiso. Ngaphandle isisekelo esikhulu ezicatshangelwayo zezinkolelo-wonke amakhasimende itholakala nezakhiwo eziningana akhawunti ukuqeqeshwa okuhambisana:
Ukuqeqesha lapho ukuhlola imininingwane kwezohwebo isifundo enemininingwane we esigungwini;
akhawunti Classic kufanelekile esithela amakhono lokuqala okusebenzayo kanye ukuhlanganisa imfundiso yokuziphendukela ku umkhuba;
akhawunti professional - lesi isixazululo esiphelele kulabo kakade ngafunda ukuhweba futhi ilungele imali enkulu.
Wonke umuntu ufuna ukuhlola emakethe exchange angaphandle ukhululeke ukuxhumana inkampani «Forex4you». akhawunti yomuntu siqu ebhaliswe kwi iklayenti ngamunye isikhungo ngeke kalula ukhethe uhlobo oluhle akhawunti kuncike ukutholakala kwamakhono ukuhweba futhi kucatshangelwa idiphozi langempela. Izimali ngaphakathi project, ungakwazi kalula ukudlulisa phakathi kwama-akhawunti, zingazikhetheli ezimvunayo iningi ukuhweba.
«Forex4you»: Bukeza anelisekile
«Forex4you» - lokhu ingenye wabathengi eziphezulu kwi-Inthanethi. Ngokusho komunye amakhasimende yenkampani, nokubambisana kusekelwe hhayi kuphela nobuchwepheshe bale abasebenzi besikhungo, kodwa futhi ukunwebeka esihleliwe amathuba abadayisi, esethulweni umsebenzi iphrojekthi ubuchwepheshe ezintsha. Uma umuntu efika inkampani futhi uhlala naye kuze kube phakade. www.forex4you Imfihlo yempumelelo kusekelwe ukubambisana ethelayo ne program engcono emkhakheni sokuthuthukiswa isofthiwe ukuhweba.
Ngokusho kwenye i-ikhasimende, plus omkhulu yikhono inkampani ukuze asebenzise i-trade Market Ukubulawa, okukuvumela ukuba ngokushesha afeze imisebenzi ngokuhambisana langempela amanani emakethe. Inzuzo yesibili yohwebo kumthengisi - kuyinto uhlelo eziyingqayizivele ezigunyaza Kuhle Ibhidi Ukunikeza. Abaningi baye baphawula njengenhlangano inzuzo khona ukuhweba ukusebenza okukodwa. Kukhona izinkomba ukuhweba ithuluzi Market Ukujula 2 ezingeni, okuyinto kukunika ukufinyelela amanani kangcono futhi amazinga 16 intengo ezinikeza zezimali abahlinzeki. abanye forex-wabathengi kuphela anganikeza amakhasimende abo nge uhlu kangaka okudingeka amathuba emkhakheni amasevisi ukuhweba. Lokhu, kanye nezinye izinto eziningi, kuhilela nokubambisana ezizosihlomulisa namanye isikhungo nokuhwebelana.
Kungani abahwebi ukhetha inkampani «Forex4you»?
abahwebi abaningi baqale ukusebenza futhi impumelelo nalo «Forex4you» inkampani. Ukubukeza i-corporation amakhasimende ayo - lokhu akulona Ukukhetha umbandela kuphela. Umdayisi enedumela elihle futhi kahle esungulwe emakethe virtual. Kusukela ngo-2007, inkampani ikhule kakhulu futhi sesisize izinkulungwane zamaphayona abantu benze ngcono izimpilo zabo. Ngo-2011, i-inzuzo izimali phakathi lemali kudlulwe $ 100 billion, ngesikhathi inombolo yama-akhawunti bhalisiwe safinyelela ayizinkulungwane 400. imisebenzi yenkampani usungaphansi komshuwalense ngoba isamba 10 izigidi zamaRandi ngo-2011. Ngo-2015 le nkampani wajoyina ngezimali inzuzo zamadola 25 billion ngenyanga, futhi inombolo yama-akhawunti ifinyelele ayizinkulungwane 800. Ukubamba iqhaza imincintiswano international, Forex4you.org iphrojekthi ephethwe izakhe njengoba:
engcono forex nomdayisi;
izimo ezingcono kakhulu idiphozi futhi ukuhoxisa izimali ezivela akhawunti;
engcono lobulungu hlelo.
Kumila zomthetho onamandla, ukwethembeka kumakhasimende, amathemba ebanzi ukuhweba, isofthiwe kakhulu, ukufinyelela ngamazwe lwemali imakethe - nesizathu esizwakalayo ukukhetha njengendlela umlingani kuyinto «Forex4you» inkampani.
Yini-akhawunti e ahlinzekwa wumthengiseli?
Cishe zonke wabathengi anikeza izinkonzo zabo kuyi-Internet, ukunikela izinhlobo ezahlukene akhawunti ukuhwebelana futhi izingcaphuno ahlukahlukene Forex, kodwa lokho luyatholakala ngaphakathi kohlaka «Forex4you» isikhungo, iya lutho ngokuqinile nanoma ikuphi ukuqhathaniswa.
iklayenti inkampani ngayinye kungavula omunye ma-akhawunti:
akhawunti Demo Wabasaqalayo ngubani angadingi kokuvula idiphozi yakho. Adayiswa kumathuluzi virtual enikeziwe wumthengiseli.
Cent-Lite ne Cent - okubangela amakhasimende idiphozi $ 1 ukuya kumathuluzi 10. Ngaphezu 100 ukuhweba ingasetshenziswa kule akhawunti (currency ngazimbili, impahla, njll). Usayizi ubuncane izinga - 0.01 lutho-eziningi futhi 0.1 ngokulandelana. Ukusabalala fixed (2 amaphuzu). Thola 1:10, 50, 100 no 500.
Cent NDD ukudayisa ngaphandle broker, okuyinto kuyasheshiswa ukuvulwa kanye lokuvala izikhundla. Trade itholakala kuphela kwemali ngazimbili nge asizakale yezindlela 1:10 500. ukusabalala elintantayo (1 iphuzu), kanye yikhomishini $ 10 eningi ngayinye.
Classic-Lite ne Classic - lena i-akhawunti emile ukudayisa 0.01 eziningi futhi 0.05, ngokulandelana. Iyatholakala ngidayisa lwemali ngazimbili ku impahla kanye CFD. Ukusabalala fixed (2 amaphuzu).
Classic NDD-akhawunti nge ukucutshungulwa kwezicelo NDDE uhlelo. izinhlamvu izingcaphuno ezinhlanu. Sabalalisa elintantayo (0.5 amaphuzu). Ukuze ahwebe etholakalayo kwemali ngazimbili kanye eziya. Broker Imali kuyinto $ 8 eziningi ngamunye.
ProSTP (E-Global MT4 MarketPlace) akhawunti ochwepheshe. Baye babhekana ngokuphumelelayo ngisho ngaphansi isu ezinjalo eziqondile njengoba scalping. Ubuncane okuningi ukuhweba 0.01. Thola ka 1:10 neyoku-1: 100. IKhomishana ilingana $ 10 eningi ngayinye.
Yini abahwebi wathi ku-oda processing speed?
Isihloko ahlukene yengxoxo - kuyinto ijubane processing oda wumthengiseli. Ngokusho amakhasimende, phakathi wabathengi eziningi lisabela ngokushesha oda «Forex4you» inkampani. Kubuyekezwe kule ndaba ayiyona neze into eyodwa imibono emihle mayelana nesivinini ezigunyaza kule nkampani, ungathola impela eningi. Ngemva kokuhlaziya amazwi abahwebi, kungaholela kwezinye izinombolo. Cent akhawunti kunoma iyiphi oda abadayisi okwenziwa ngaphakathi 2 imizuzwana, kepha hhayi ngaphezulu. Requotes kanye nokubambezela processing oda kuze kube amasekhondi angu-5-10, noma kukhona, kodwa kunalokho okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho. Ema-akhawuntini classical izocubungulwa oda kuthatha esingaphansi 2 imizuzwana. Trades ku-akhawunti professional zigcinwe ngaphandle kokulibala abalulekile, ephethe ukulibala 0.5 imizuzwana. Okubalulekile Kuyaphawuleka ukuthi ukwehluleka cishe ziphinde zenzeke ku ukuphela kwe inkampani futhi akavumi ukuba amakhasimende ukulahlekelwa isikhungo.
Njenganoma yimuphi omunye nomdayisi, inkampani inikeza uhlu olubanzi amasevisi hhayi kuphela abadayisi kodwa abatshalizimali. Wabathanda «Forex» (emakethe scares, futhi uzimisele zohwebo zabo kuze kube manje), iphrojekthi luvula ukufinyelela smart Lwezinhlelo utshalomali. Ungakwazi ukutshala kwelinye mikhiqizo elandelayo:
Share4you - uhlelo amakhophi ukuthengiselana.
Futhi PAMM futhi Share4you ahlinzeke inhloko-dolobha nzuzo U-150% futhi 300% ngokulandelana yesibambiso kokuqala noma ngaphezulu. Ulwazi on the ukulawula ukuhweba okukhululekile, futhi ingakwazi ukuhlola ezingeni ulwazi kanye namasu abadayisi sika. Vula lobambiswano uhlelo ikuvumela ukuthi ukhethe indlela ephephile futhi ephumelela kunazo ukuze wande dolobha. Uma nje abantu uzokwenza yini ayithandayo, nenhloko-dolobha yalo kuyoqhubeka ukwandisa.
ithuluzi Innovative zimali Share4you
Uhlelo elisha utshalomali Share4you olwesimanje ngokuphelele, futhi uma kuqhathaniswa imikhiqizo efanayo evela kwamanye wabathengi ukunikela eziningi eziwusizo:
Kopisha abathengisa aqede slippage, ngenxa okuyinto eziningi ngaphambili elahlekile ezifakwa zabo;
Kungaba kwenziwe ukuqapha esihleliwe ukuhweba in esibulalayo ayo, ukuvulwa kanye lokuvala kuthengiselana;
ukukopisha kungaba kwenziwe ngokuphelele noma ingxenye. Ngamunye ekhetha nemingcele elilungile.
Noma yimuphi inkampani ikhasimende bangahlola amandla abo nje indima obhalisile, umuntu amakhophi kuthengiselana, kodwa njengoba umholi, abadayisi ekulandiseni okuyinto wena yokukopisha. Ungalungisa izilungiselelo ikhophi elikuvumela ukuthi bahlukanise phakathi izingozi futhi uvikele inhloko-dolobha yabo kusukela subsidence. Ngokuqhathaniswa PAMM akhawunti, Share4you iphrojekthi evumela ukuba ningayeki kwesigamu ukulawula inzuzo. Ngamunye kuthengiselana kabili ikhokhelwa ngamunye. Ngokusho abaholi inikeza ulwazi olunzulu, ezisukela usayizi iphesenti subsidence futhi aliqede nemingcele ezifana inzuzo nolaka. Ukuze ezibukwayo bezibona umholi ukuhweba inikeza emagrafu of idiphozi yayo.
Into kuphela ukuthi sinconywa zimali abanolwazi - lokhu akukona abadayisi ukukhetha kuphela nemingcele olunikezwa website yayo ukuhweba. Ukuze afike kulo magazini ngokujulile ukuhlaziya ulwazi enikeziwe in the iforamu.
Analytics "Forex4you" - umsizi ophelele kwezohwebo
Analytical Centre - lokhu ingenye main «Forex4you» kokufaneleka yephrojekthi. Amalungu Area inikeza ukufinyelela izibikezelo kanye kuhlatiya isimo ngokuholela abahlaziyi kwezomnotho. Nsuku zonke, amakhasimende yenkampani ukuhlinzeka analysis eningiliziwe lokubalulekile lobuchwepheshe ezinkulu kwemali ngazimbili. Imininingwane bangaba isisekelo esiqinile ekwakheni ukuhweba isu ngempumelelo. Le phrojekthi inikeza ukufinyelela ikhalenda izindaba kwezomnotho ezithinta Dynamics of the «Forex» emakethe. Izibuyekezo Customer abonisa ngokucacile ukuthi ehlongozwayo ulwazi project kuthuthukisa ukuhweba ukusebenza futhi isiza ekuphetheni amadili inzuzo. Vula ukufinyelela kuyinto umhlaziyi kusukela Ukuhweba Central. inkonzo Iyatholakala ngokuthi "debriefing", okuyinto ikuvumela ukuba ahlaziye ukuthengiselana ku-akhawunti abadayisi futhi ukukhomba amaphutha ezinkulu. Lokhu kuthuthukisa ukuhweba futhi akavumi ukuba bawe on «Forex» emakethe namasu. impendulo kwamakhasimende mayelana sipho elingaphezu kwelivamile umxhwele. Futhi ekugcineni, a isithakazelo esikhulu Ukuhweba kungaba ukubhalisela feed Dow Jones futhi Fx Khetha. Qaphela yezindaba zemihla uphishekela izinto kwezomnotho okwenzeka emhlabeni wonke - kusho ukuthini ukuba phezu Crest of igagasi jikelele lwemali emakethe. Analytics ngenkathi hhayi ukutshela isikhathi esiphelele bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla, kodwa ziyonquma okuyiyona yokudayisa. Izinqumo iyothathwa ngesisekelo neshaya ehlungiwe abanolwazi Imininingwane abahlaziyi. Ukuhweba ngeke uthathe eziningi umzamo, futhi ngaso sonke isikhathi i-DRM.
Hola imali ngaphandle imali
Phakathi iminikelo eziningi inkampani yabakhanga uhlelo oluhlangene. Iyatholakala ukuhlela ku-intanethi hhayi kuphela, kodwa futhi ngokubambisana ngaphandle kwe-intanethi. Kungenjalo, inkampani iklayenti kungenziwa eyasungulwa ngo ehhovisi esifundeni bese isimo omele esemthethweni.
Okuvame kakhulu Uhlelo lobulungu - intanethi ngokubambisana. Umrholo ikhokhelwa hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa abahwebi abathintekayo, kodwa futhi ngoba abalingani ezintsha. Inzalo ibalwa ngesilinganiso 50% we ukusabalala, okuyinto bakhangwa abahwebi ukukhokha ngenxa ukuhweba. Namakhasimende, ukhangwa abantu abasha kumele sikhokhwe imali 16.7% we ukusabalala. Kusukela ezingeni wesithathu ikhasimende is icala 5.6%. ukukhangisa-Partner izinto izotholakala ngemuva Wazilandisa ekhethekile. «Forex4you» inikeza izixhumanisi kanye amabhanela, amawijethi, abahlanganyeli best of «Share4you» project, isicelo sokubhalisa ukuze ukufakwa isayithi siqu.
Izinzuzo lobulungu ngaphakathi enkampanini kungenziwa efakwa ndawonye ohlwini olulandelayo:
iphesenti eliphezulu ngokwanele lomholo;
ukuqapha inthanethi we-akhawunti amakhasimende aphethwe uhlelo lobulungu;
Ukuhoxiswa izimali nganoma isiphi mngcele inani lemali elincane okukhipha etholakalayo;
hhayi uzimele isikhathi amakhukhi ukuheha abathengi;
ifomu evulekile ukuqapha ukuvakashelwa yokukhangisa izinto ezibekwe phezu inethiwekhi i lobulungu;
isaziso ukubhalisa i-akhawunti entsha ku ukukhangisa links;
isiphelo sesimiso inkontileka ne maphakathi nokuhwebelana kanye ukuhoxiswa okwalandela kwezimali ku-akhawunti. Forex-lwemali ngokushesha ibe imali yangempela.
Kukhethwa unikezwa lobulungu ambalwa umvuzo ngamunye wabo ibalwa ngamunye. Ngezinye izikhathi, bakhangwa abadayisi kumele wenze inombolo ethile imisebenzi, futhi kuphela ke uqale ukukhokha. Enye - iyona accrual inzalo ngamunye abalingani kuthengiselana abathintekayo. Imali angadluliselwa akhawunti sabalingani njalo ngemva kwamahora amabili. Ithuba ukuthuthukisa izinga labo lokuphila njengoba atholakale wonke ngaphandle utshalomali sikubeke sobala.
Sekela ikhasimende esisemthethweni - ezingeni European
Inkampani ngendlela yokukhula ikhasimende kusukela kumuntu ovamile ezingeni abadayisi onekhono noma zimali inikeza ukwesekwa professional. Ukuze ukuhweba inikeza wonke amathuluzi adingekayo: izinkomba, ukuhlaziya idatha, ezobuchwepheshe kanye nokuhlaziywa ayisisekelo, abeluleki. «Forex4you» - iyinkampani global ezingeni elifanele lenkonzo kumakhasimende ayo. Ukuxhumana abaphathi yenkampani ubusuku nemini. Ungasebenzisa inthanethi-chat, ifoni noma ithikithi uhlelo ku-akhawunti yakho. Wonke umsebenzi le nkampani kuyinto liyakujabulela ukuhlangana amaklayenti ngamunye, senza wonke umzamo ukuphendula imibuzo nesithakazelo umuntu. ukwesekwa abafanelekayo akuxhomekile nenani kwezimali ku-akhawunti, usizo luyatholakala ngisho nakulabo ubukhulu idiphozi dollar. Forex ukuqonda ngokushesha futhi ngaphandle kosizo cishe kungenakwenzeka. Inkampani uqondisa wonke amandla ukuthi amaklayenti ngamunye kwaba yimpumelelo.
Le nkampani iqasha ochwepheshe oluphethe Chinese English, French futhi isiJalimane, isiNtaliyane futhi isiRashiya, iSpanishi futhi Hindi, Malay futhi Indonesian. Umgoqo wolimi engekho nhlobo. Impendulo imibuzo kunazo zonke singatholwa yinoma ngokushesha. Kungenzeka ukushiya isicelo ngocingo. Ayikho inkampani-nomthengisi ekusizeni amakhasimende ayo ukuqonda ngokujulile ngakho futhi kuzongisiza emakethe «Forex». Euro noma zamadola ku-akhawunti, zikasayizi idiphozi noma enkulu - njalo umthengisi saqala kuyodingeka ayenazo umphathi siqu. Inkampani uyakufanelekela lokukhetha ukuthi njengoba umlingani unomphela. Ngosizo Forex - emakethe lapho izigidigidi ezingqubuzanayo ezaziyaluzisa - ungumthombo esiphelele engenayo.
"Lancome Hypnosis" - isithombe engaqondakali ehlanganisa obugagu nesisa, imfihlakalo futhi engeyona inkimbinkimbi